VaKikwete Vokurudzira Nyika Dzekumawirira Kuti Dzisanyomba VaMugabe
Gumiguru 05, 2007
Mutungamiri weTanzania, VaJakaya Mrisho Kikwete, vanoti dai dzimwe nyika dzekumawirira nemamwe masangano akazvimirira, vambomira kushoropodza VaMugabe, sezvo vamwe vatungamiri vemuAfrica, vari kuedza kubatsira pakugadzirisa dambudziko riri muZimbabwe.
Mumashoko avo mubepanhau re Financial Times, VaKikwete vanoti pakugadzirira musangano mukuru wevatungamiri venyika dziri European Union neAfrican Union, VaMugabe vanofanirwa kuremekedzwawo semutungamiri wenyika, kwete kungoramba vachingoshorwa nguva dzese.
VaKikwete ndivo vakambodaidzira zvakare musangano wevatungamiri venyika dzemu SADC wechimbichimbi kuTanzania muna Kurume, kuti vazeye matambudziko emuZimbabwe, apo pakazodomwa VaThabo Mbeki, samutongi gava pagakava riri muZimbabwe.
VaPedzisai Ruhanya, vanoongorora zvematongerwo enyika, uye vari programs manager musangano re Crisis Coalition in Zimbabwe.
Mutori wenhau weStudio 7 Carole Gombakomba, aita hurukuro naVa Ruhanya, kuti tinzwe pfungwa dzavo, pane zviri kutaurwa naVa Kikwete.